पञ्चकन्याले राष्ट्रिय गान गाए पनि युएनपीओको सदस्यता यथावत
सिरहा, ४ चैत । सरकारसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेपछि जनकपुर झरेर ‘गुप्तबास’ बसिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतले आइतबार देखि लाहानमा दुईदिने राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकेका छन् ।
तर, अखण्डतालाई स्वीकार गरेका डा. राउतले जनकपुर एयरपोर्टको नाराबाजीपछि सहमति तोड्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । सरकारले उनीमाथि निगरानी बढायो । त्यसपछि डा. राउत मिडियामै नआइकन मौन बसे । र, यही मौनताका वीच आइतबार लहान राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकिएको छ । बैठक सोमबारसम्म चल्ने र पार्टीको आगामी कार्यदिशा तह हुने गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परिषदको बैठक शुभारम्भ गर्दा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरिएको र सहभागी सबैका लागि नागरिकता , लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन् । डा. राउतले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको तस्वीरमा फ्री मधेसको तुल ब्यानर देखिएको छैन । रातो साडी लगाएका पञ्चकन्याबाट राष्ट्रिय गान गाएर बैठकको सुरुवात गर्दै डा. राउतले मूलप्रवाहमा समाहित भएको सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
स्पेनिस लिग फुटबल : मेसीको ह्याट्रिकमा रियल बेटिसमाथि बार्सिलोनाको सानदार जित